SARIPIKA: Olombelon’i Azia Atimo-Atsinanana (Humans of Southeast Asia) · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Desambra 2013 10:07 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, فارسی, русский, 繁體中文, 简体中文, English
Aingam-panahy nanosika mpakasary marobe manerana ny tany mba hizara saripika sy tantaran'ireo olon-tsotra eny an-dalambe eny, any amin'ny firenena misy azy ireo tsirairay avy, ny Humans of New York, pejy Facebook noforonin'i Brandon Stanton. Ndeha hojerentsika ny hetsika mitovy amin'izany ao Azia Atsimo-Atsinanana.
Noforonina tamin'ny 17 May 2013 ny Humans of Brunei (Olombelon'i Brunei). Sarinà Brunei mpianatra ity ambany ity
Mifanindran-dàlana amin'izay, noforonina ny 16 Aogositra 2013 ny Humans of Indonesia, Olombelon'i Indonezia. Sarin'ireo Indoneziana tao amin'ny riandrano Harau ao amin'ny faritr'i Bukittinggi ity ambany ity :
Misy koa ny pejy Humans of Jakarta – Olombelon'i Jakarta. Jakarta no renivohitr'i Indonezia
Tsidiho ny pejy Humans of Bali – Olombelon'i Bali. Bali dia nosy iray malaza ao Indonezia.
Ao Malezia, hazavain'i Avinash ny hevitra nananganana ny pejy Humans of Malaysia – Olombelon'i Malezia:
Misy pejy iray mitokana ho an'ny Humans of Kuala Lumpur – Olombelon'i Kuala Lumpur. Kuala Lumpur renivohitr'i Malezia.
Tsy dia misy fanavaozana matetika ny pejy Humans of Thailand – Olombelon'i Thailand, saingy toa mavitrika kosa ny page Humans of Bangkok – Olombelon'i Bangkok. Bangkok dia renivohitr'i Thailand. Zon no manazava ilay tetikasa:
Raha miharatsy ny krizy politika ao Thailand, ireo mponin'i Bangkok kosa mangataka ‘Alahady tony’ iray.
Tsidiho koa ny pejy Humans of Chiang Mai – Olombelon'i Chiang Mai. Chiang Mai dia any Avaratr'i Thailand.
Ao Vietnam, tianay hasongadina ny Humans of Saigon -Olombelon'i Saigon, sy ny Humans of Hanoi – Olombelon'i Hanoi
Ao Laos, misy ny pejy Humans of Vientiane – Olombelon'i Vientiane. Vientiane no renivohitry ny firenena.
Ity ambany ity ny sarin'i Stacy avy ao Singapore makamaka aina eo amoron'ny Clarke Quay. Sary avy amin'ny pejy Humans of Singapore – Olombelon'i Singapore:
Tsidiho ny Humans of the Philippines – Olombelon'i Filipina sy ny Humans of Manila – Olombelon'i Manila. Manila dia renivohitr'i Filipina.
Ny pejy People of Yangon – Olon'i Yangon – dia noforonin'i Chris James White ary aingam-panahy nateraky ny hevitra Humans of New York ihany koa. Yangon dia tanàna lehibe ao Myanmar.